Daadkii Roobkii Xalay Oo saamayn Naf iyo Maalba leh Gaystay - Cakaara News
Daadkii Roobkii Xalay Oo saamayn Naf iyo Maalba leh Gaystay
Jigjiga( cakaaranews )Isniin 4ta April 2016, Roobab kada’ay caasimada jigjiga iyo nawaaxigeeda ayaa gaystay khasaare dhimasho Naf iyo Maalba leh kadib markii Xalay saqdii dhexe uu kusoo rogmaday togu, islamarkaana xaafadihii kuyaalay agagaarka toga kuyeeshay khasaare balaadhan.
Hadaba Wasiirka Xafiiska Kahortaga Masiibooyinka mudane Maxamed Daahir oo kahadlay saamayntii biyaha toga ayaa sheegay in dad tiradoodu dhan tahay 23 qof ay dhimatay islamarkaana 15 kamid ah maydkooda lahayo meesha 8 kamida laraadinayo maydkooda wuxuuna tacsi tiiraanyo leh udiray eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen.
Sidoo kale, wuxuu xusay wasiirku in 84 qof ay dhaawac yihiin islamarkaana lagu baxnaaniyo hospitaalka karamardha. wuxuuna intaa kudaray in biyuhu ay qaadeen 262 qoys, 5gaadhi, iyo waliba dhibaato ay ugaysteen Dugsiga sare ee sheikh cabdi salaam iyo dusiga hoose dhaxe ee xuseen giire.
Dhinaca kale, wuxuu masuulku sheegay in ciidamada gaarka ah ee liyuu boolis ay badbaadiyeen 1,226 qoys islamarkaana ay kudhaawacmeen 14 kamida saraakiisha ciidanka kuwaasoo kamid ahaa ciidamadii gurmadka ahaa ee badbaadinayay shacabka.
Sikastaba ha ahaatee wasiirka ayaa xusay in masiibadan loo xilsaaray gudi sare oo latacaalaya dadkii uu saamayeey. waxaa kale oo ay xukuumadu qorshynaysaa sidii xal loogu heli lahaa togan magaalada dhaxmara si uunan mardanbe khasaare ugaysanin.